Choputa Wewelsburg Castle | Akụkọ Njem
El Castle Wewelsburg dị na steeti German nke North Rhine-Westphalia. Ọ bụ nnukwu ụlọ nke narị afọ nke XNUMX nke e wuru na usoro European Renaissance. Mana nnukwu ụlọ a abụghị ama maka ihe owuwu ya, kama ọ bụ ebe ọ nọ n'ụlọ ndị SS, otu nzukọ na-elekọta Hitler n'oge Nazi Germany. N'ihi nke a, ọtụtụ n'ime ndekọ ya na akụkọ ihe mere eme furu efu.
Anyị na-aga muta obere ihe banyere akuko nke ulo a nke nwere ụlọ ihe ngosi nka taa ma enwere ike ịga leta. Ọ bụ nnukwu ụlọ nke metụtara akụkụ kachasị njọ nke akụkọ ntolite German, mana obi abụọ adịghị ya na ọ nwere ike ịbụ ebe nnukwu mmasị ịmụtakwu banyere oge a.
1 Ebee ka ọ dị
2 Akụkọ banyere Castle Wewelsburg
3 Lọ nke ndị SS
4 Nnukwu ụlọ taa
El Castle Wewelsburg dị na mpaghara Paderborn na North Rhine-Westphalia. Obodo nta nke Wewelsburg nke nnukwu ụlọ a dị n'ime obodo Büren. Iji hụ ebe a, anyị nwere ike ịdata na ọdụ ụgbọelu dị iche iche dịka Cologne, Hannover ma ọ bụ Düsseldorf, nke dị ihe dị ka awa anọ. Site na ọdụ ụgbọ elu ndị a, anyị nwere ike ịchọta ụgbọ njem ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala gaa Wewelsburg. Ihe kachasị akwadoro bụ doro anya na ọdụ ụgbọ elu Düsseldorf, nke kachasị nso, yana ụgbọ oloko na-abata n'ihe dị ka awa abụọ na Paderborn.
Akụkọ banyere Castle Wewelsburg
A rụrụ ụlọ a na ọdịdị ya ugbu a na narị afọ nke XNUMX, bu n'obi ka ọ bụrụ ụlọ obibi nke Prince Bishop nke Paderborn. Agbanyeghị, n'ugwu a, e nwere ụlọ na mgbidi ndị ọzọ gara aga ọbụna na narị afọ nke iri, n'ihi ọnọdụ ya dị mkpa. Lọ elu a mebiri emebi ma bibie ya n'oge ụfọdụ, dịka ọ dị na Afọ Iri Atọ. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, e wughachiri ya na narị afọ XNUMX ka ejiri ya dị ka ụlọ mkpọrọ ndị agha. Akụkọ mgbe ochie kwuru na ọbụladị ụmụnwaanyị eboro ebubo amoosu ka a tụrụ mkpọrọ. Ugbua na Narị afọ XNUMX, ụlọ a ghọrọ akụkụ nke alaeze Prussia. N’afọ 1924, nnukwu ụlọ ahụ ghọrọ nke mpaghara Büren ma bụrụzie ebe ọdịnala. N’afọ 1925, ejirila nnukwu ụlọ dịka ebe obibi ndị ntorobịa, ebe a na-eri oriri, ebe a na-eri nri na ebe a na-edebe ihe mgbe ochie.
Lọ nke ndị SS
Heinrich Himmler bịanyere aka na ọdụ nke Paderborn na 1934 nke otu narị afọ na nnukwu ụlọ. Ebumnuche nke onye ndu a nke SS bụ ka ọ rụzigharịa nnukwu ụlọ ahụ dị ka ebe ọzụzụ maka ndị isi nke nzukọ a raara nye Nazism. Amabeghị n’ezie ihe kpatara o jiri kpebie ịgbazite ebe a, mana ekwuru na ọ nwere ike ịbụ maka amụma Karl Maria Willigut kwuru gbasara agha Birch. Dika amuma a si di, agha ikpeazu na-abiaru nke ndi agha West ga-emeri usuu ndi agha. O doro anya na nnukwu ụlọ a ga-abụ ebe ga-ekpebi mmeri nke agha ahụ, wee bụrụụrụ ya akara nke mmeri ọzọ. O kwenyere na nnukwu ụlọ a ga-abụ etiti ụwa mgbe a meriri ndị agha ndị ọzọ.
Ka oge na-aga a mụtara na ụlọ akwụkwọ ahụ emeghị, kama kama e wuru ebe a na-amụ ihe mgbe ochie maka ọmụmụ banyere agbụrụ Aryan na nnukwu ụlọ. Iji mezuo nke a, ha kere mpaghara nyocha dịgasị iche iche, na prehistory, akụkọ mgbe ochie na akụkọ ọdịnala na ọbá akwụkwọ maka ndị SS. Enwetakwu ego na nnukwu ụlọ a iji mepụta echiche echiche. Ugbua na 1939 Himmler n'onwe ya ga-amachibido akwụkwọ ọ bụla gbasara ụlọ. N'oge a, a chere na nnukwu ụlọ ahụ bụ etiti ụwa ọhụrụ. Site n’afọ ahụ gaa n’ihu, a ga-eji ndị ọrụ sitere n’ogige ịta ahụhụ dị ka Sachsenhausen rụzigharị nnukwu ụlọ ahụ.
Nnukwu ụlọ taa
Taa ọ ga-ekwe omume ileta nnukwu ụlọ ma hụ ụlọ ya dị iche iche. Edere ya ka ọ bụrụ ihe ncheta nke afọ ndị a gbara ọchịchịrị nke akụkọ ntolite German, iji ghara ichefu ọrụ ndị SS na ndị Nazi. You pụrụ ịhụ ebe dị ka crypt, nke na-e mimomi ili Mycenaean iji cheta ndị nwụrụ anwụ. N’etiti ya ọ ga-abụrịrị ire ọkụ ga-adịru mgbe ebighị ebi na ụkwụ iri na abụọ gbara ya gburugburu, nke a na-amaghị ihe ọ pụtara. Mana ụdị ebe ndị a na-enye anyị echiche banyere akara ngosi gbara ndị Nazi na ndị isi ya gburugburu.
I nwekwara ike ịhụ a maara dị ka Generals Room nwere okwute mabul nke anyị nwere ike ịkele maka mosaic na-anọchi anya Black Sun nwere ụzarị iri na abụọ mejupụtara akara SS. Mgbe ndị Nazi tufuru agha ahụ, Himmler nyere iwu ka akwatu nnukwu ụlọ ahụ mana ọ nọgidere na-eguzo ma weghachite ya.
Taa na nnukwu ụlọ anyị nwere ike gaa na SS Museum na obughi ebe ncheta kama obu oghere icheta ihe ha mere. N'ime ebe a, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ n'ime akwụkwọ akụkọ Himmler.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Castlọ Wewelsburg